भिसा एक्सटेन्सन गर्ने विचारमा छु - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
२०७४-१०-२ बिचार / प्रतिक्रिया
म नेपालबाट ३ महिनाअघि बी–२ भिसामा अमेरिका आएको हुँ । ५ वर्षको भिसा दिएको छ । मेरो यो अमेरिका भ्रमण पहिलो पटक हो । एयरपोर्टमा ६ महिनाको भिसा दिएको थियो, अब ३ महिना मात्र बाँकी छ । आफन्त र साथीहरुले अरु ५–६ महिना भिसा थप गर्न पाइन्छ भनेर सुझाव दिएका छन् । म पनि भिसा एक्सटेन्सन गर्ने विचार गर्दै छु । तर, भिसा एक्सटेन्सन हुने ग्यारेन्टी नभई त्यसै निवेदन पेश गर्न मन छैन । भिसा बिगारेर बस्न पनि मन छैन । घरीघरी आउन नसकिने भएकाले केही महिना बढी बस्न मन छ । बडो अन्योलमा परेकाले यसका लागि के गर्दा ठीक हुन्छ, सल्लाह पाए आभारी हुने थिएँ ।
बी–२ अथवा टुरिष्ट भिसा लिएर आएको खण्डमा साधारणतया ६ महिनाको भिसा पोर्ट अफ इन्ट्री अथवा एयरपोर्टमा दिने गर्दछ । टेम्पोररी पर्पोजका लागि अमेरिका आए पनि जुन उद्देश्यले आएको हो वा कुनै कारणवश सो उद्देश्य पूरा नभएको खण्डमा अधिकतम् अर्को ६ महिनासम्म भिसा एक्सटेन्सन गर्न सकिन्छ । भिसा एक्सटेन्सन गर्दा आई–५३९ फारम भरी युएससीआईएस दस्तुर राखी, कुन कारणले भिसा एक्सटेन्सन गर्नुपरेको हो, तपाईंसँग एक्सटेनडेड पिरियडसम्म आफूलाई खान, बस्ने खर्चको व्यवस्था भएको र सो ट्राभल गोल पूरा भएपछि आफ्नो मुलुक फर्कने निश्चिन्त छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने कागजपत्रहरु पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । भिसा एक्सटेन्सनको निवेदन पेश गर्दा भिसा एक्सपायर हुनुअगावै युएससीआईएसमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा १ महिना वा ४५ दिन अगावै सो निवेदन पेश गरेमा राम्रो हुनेछ । भिसा एक्सटेन्सनको निवेदन पेश गरेपछि १–२ महिनादेखि ४–५ महिनासम्म पनि सो निवेदनको निर्णय हुन समय लाग्न सक्नेछ । भिसा एक्सटेन्सनको निवेदन अप्रुभ नै हुन्छ भन्ने केही पनि ग्यारेन्टी हुँदैन । कहिलेकाहीं युएससीआईएसलाई तपाईंले पेश गरेको कागजपत्रबाट चित्त नबुझेमा अरु थप कागजपत्र पनि माग गर्न सक्छ । तोकेको म्यादभित्रमा माग गरोके कागजपत्र दाखिला गर्न सक्न्ुभएन भने वा पेश गरेको कागजपत्रले युएससीआईएसलाई चित्त नबुझेको खण्डमा तपाईंको निवेदन डिनाइ पनि हुन सक्छ । यदि युएससीआईएसलाई तपाईंले पेश गरेको गकाजपत्रहरुमा चित्त बुझ्न आए अनुरोध गर्नुभएअनुसार थप भिसाको समय अप्रुभ गरी नयाँ आई–९४ डकुमेन्टमा सो थप म्याद झल्कने गरी पठाइदिनेछ । यदि समयमै तपाईंले माग गर्नुभएको समयावधि थप भएर समयमै आएको खण्डमा तपाईंलाई सजिलै हुनेछ र तपाईंको ५ वर्षे बी–२ मल्टिपल इन्ट्री भिसा पनि बिग्रने छैन । तर, यदि तपार्ईंको भिसा एक्सटेन्सनको निवेदन डिनाइ भएर आयो र सो आउँदाको समयमा तपाईंको आई–९४ मा भएको भिसा भ्यालिड नै छ भने सो भिसा एक्सपायर हुनुअगावै युएसए छोडिजानुपर्ने हुन्छ । तर, तपाईंले दिएको भिसा एक्सटेन्सनको निवेदन डिनाइ भयो र सो डिनाइल तपाईंको आई–९४ मा भएको भिसा एक्सपायर भएपछि मात्र आयो भने तपाईंको भिसा एक्सपायर भएको दिनदेखि तपाईंलाई इलिल मानिनेछ र त्यसपश्चात् तपाईंले अन ल फुल प्रिजेन्स एक्रु गर्नुहुनेछ । भिसा स्टाटस इलिगल हुनुका साथै तपाईंको ५ वर्षको बी–१, बी–२ मल्टिपल इन्ट्री भिसा पनि भ्वाइड हुनेछ । अर्थात् तपाईंको ५ वर्षको बी–२ भिसा स्टिकर पासपार्टमा भए पनि त्यसको प्रयोग गर्न सक्नु हुने छैन । त्यसैले भिसा एक्सटेन्सन प्रावधान युएस इमिग्रेसन ल मा भए पनि एक हिसाबले भिसा थपिएर नै आउँछ भन्ने केही ग्यारेन्टी हुँदैन भने अर्को हिसाबले भिसा थप भएर पनि आउन सक्छ । त्यसैले मुख्य कुरा तपाईंले यो विचार गर्नुपर्छ कि तपाईंलाई भिसा थप गर्न कति जरुरी छ ? यदि भिसा एक्सटेन्सनको निवेदन डिनाइ भएमा वा ५ वर्षे मल्टिपल इन्ट्रीको भिसा बिग्रन जाने स्थिति भएमा के तपाईं त्यो रिस्क खेल्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन ? यी सम्पूर्ण पोजिटिभ र निगेटिभ दुवै कुराहरुलाई केलाएर तौलेर ठोस विचार गर्न जरुरी हुन्छ । भिसा एक्सटेन्सनको निवेदन पेश गर्दा सबै कानूनी दायित्व र माग पूरा हुने किसिमले निवेदन युएससीआईएसमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । भिसा बिग्रन गयो र इलिगली नै युएसएमा बस्न गएमा भविष्यमा विभिन्न कानूनी कठिनाइहरु पनि पर्न आउन सक्छ । त्यसैले यो भिसा एक्सटेन्सनको काम सरल र धेरै जटिल नदेखिए पनि बेलैमा अनुभवी कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरे उचित हुनेछ ।